Shirkadda Profile-KOSMOS Hoyga Dharka Co., Ltd.
Mowqifka aad taagan tahay: Hoyga>Nagu saabsan>Profile Company
HOOS KA AKHRISO KOSMOS
Dharka Guriga ee KOSMOS Waxaa la aasaasay 2002, wuxuu ku takhasusay soo saarista gogosha. Shirkaddayadu waxay ku taal Nantong, gobolka Jiangsu, oo soohdin u leh magaca "Magaalada Dharka Guriga". Waxaan ku qalabeysannahay erey cusub oo R&D ah, nidaam madax banaan oo ka shaqeeya suuqa iyo saldhig wax soo saar oo dhameystiran si loo helo dharka guryaha oo moodada leh. Wax soo saarkeenu wuxuu ku raaxeeyaa sumcad sare gudaha iyo dibaddaba.
KOSMOS wuxuu geliyaa qalbi dhan si loo wanaajiyo tayada nolosha qoyska marwalbana wuxuu hor taagan yahay moodada si uu u dhiso bey'ad deggan oo la isku hagaajiyay.Waxyadoo ku saabsan jilayaasha gaarka ah, tayada sare iyo naqshada cusub, waxay raacday talaabada nolosha casriga ah.
Waa yoolka ugu dambeeya ee KOSMOS inuu sameeyo tabaruc lagu hagaajinayo xaaladda nolosha iyo sidoo kale horumarintiisa. Faa'iidada taraafikada ku habboon, ilaha hodanka ah iyo dhaqanka ganacsiga qoto dheer.
Shirkadda ： KOSMOS Dharka guriga
Waxaa la aasaasay Year 2006 Sannadkii
Nooca Ganacsiga ： Soo saaraha & Shirkadda Ganacsiga
Shaqaalaha ： 100 ka hooseeya
Suuqa weyn ： Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika, Bariga Aasiya, Bariga Dhexe
Dekadda ugu dhaw ee dhoofinta alaabada ： Shanghai, Nantong
Qodobbada gaarsiinta ee ka hooseeya qaabka ganacsiga ： FOB, CFR, CIF
Hababka lacag bixinta ee la aqbali karo ： T / T, L / C
Isbeddelka ganacsiga ： USD 3 - 5 milyan sanadkii
Adeegyada aasaasiga ah ： Soosaaraynta iyo Qalabeynta Qoraallada
Cinwaanka ： Qi'An Warshadaha, Degmada Tongzhou, magaalada Nantong, Shiinaha
Cabbirka dhoofinta ： USD 3 - 5 milyan sanadkii
Tirada shaqaalaha qaybta ganacsiga ajnabiga ： 6 ~ `10
Tirada cilmi baarayaasha ： 5 ~ 10
Tirada kormeerayaasha tayada leh ： 5 ~ 10
Tirada dhamaan shaqaalaha ： 100 ka hooseeya
Wada shaqeynta iskaashiga
Dal iib ah
SOO SAARIDDA AASKA
Iyada oo loo marayo qaabeynta caanka ah iyo tayada sare, Jintian Dharka (Nantong) Co., Ltd waxay ganacsigooda si isdaba joog ah ugu ballaarisay dibedda iyo suuqa maxalliga ah. Gaar ahaan Koonfurta Amercia iyo Bariga Dhexe, ganacsigeenu wuxuu ku dhowaa inuu daboolo dhammaan dalalka ku yaal labadan aag. Waxaan shirkaddeena ka go'an nahay sidii aan u horumarin laheyn ganacsi dheeri ah. Waxaan runti rajeyneynaa inaan horumar ku sameyn karno oo aan ka wada shaqeyno sidii aan kor ugu qaadi lahayn horumarka guud ee macaamiisha cusub iyo kuwii hore.
Fikradda suuq geynta
Xoogga saar tayada
Konton dal iyo gobol
Wadamada iibka kulul
In kabadan 30 xafiis